press - TEAM Ventures
Posted on December 14, 2021 December 14, 2021 by teamventure
Posted in pressLeaveaComment on बुटबल र सिमरामा इलेक्ट्रिक स्कुटरको एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना गर्न खोज्दैछौंः अशोक खड्गी
Posted on December 14, 2021 by teamventure
काठमाडौं – भारतीय इलेक्ट्रिक स्कुटर ब्रान्ड प्योर ईभीको सोरुम हेटौंडा र बर्दिबासमा खुल्ने भएको छ । नेपालका लागि प्योर ईभीको आधिकारिक वितरक ह्वाइट लोटस प्रालिले यी दुई स्थानमा भोलि सोरुमको औपचारिक शुभारम्भ गरिने बताएको छ ।
हेटौंडाको कान्ति राजपथमा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडसँगै प्योर ईभीको सोरुमको रुपमा बाघ भैरब ई मोटर्स सञ्चालन हुनेछ । उक्त सोरुमको संचालक श्याम लोहनी हुन् । त्यसैगरी बर्दिबासमा रमेश श्रेष्ठद्वारा संचालित श्रेष्ठ इन्टरप्राइजेजले प्योर ईभीको सोरुमको कार्य गर्नेछ ।
सोरुम शुभारम्भसँगै प्योर ईभीको इलेक्ट्रिक स्कुटर टेस्ट राइड गर्न सकिने बताइएको छ । सो क्षेत्रका राइडरहरुलाई कम्पनीले यसका लागि आमन्त्रण समेत गरेको छ ।
हाल नेपाली बजारमा प्योर ईभीको ईप्लुटो ७जी स्कुटर उपलब्ध छ । ईप्लुटो ७जीमा २.५ किलोवाटको ब्याट्री र २ हजार २ सय वाटको मोटर छ । सिंगल चार्जमा ११६ किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ । ईप्लुटो ७जीको मूल्य २ लाख ६० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
केही दिनमै ईट्रान्स नियो इलेक्ट्रिक स्कुटर समेत बिक्रीका लागि उपलब्ध हुने बताइएको छ । हाल यसको बुकिङ खुलेको छ । ईट्रान्स नियो स्कुटरको मूल्य २ लाख ४९ हजार रुपैयाँ छ । यसमा ६० भोल्ट २.५ किलोवाट आवर क्षमताको पोर्टेबल ब्याट्री प्याक र १.५ किलोवाट नोमिनल र २.२ किलोवाट पिक बिएलडिसी मोटर छ । जसले सिंगल चार्जमा ११६ किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ ।
स्कुटरको ब्याट्रीमा ३ वर्ष, तथा मोटर र कन्ट्रोलरमा १/१ वर्षको वारेन्टी र एक वर्षमा ४ पटक सम्म फ्रि सर्भिसिङ कम्पनीको तर्फबाट उपलब्ध गराइने छ ।
Posted in pressLeaveaComment on हेटौंडा र बर्दिबासमा प्योर ईभीको सोरुम खुल्ने
काठमाडौँ। पेट्रोलको मूल्य बृदिका कारण आहतमा परेका स्कुटर प्रयोगकर्ताको लागि वरदान साबित हुने खालको इलेक्ट्रिकल स्कुटर बजारमा आएको छ। प्योर ईभीले बजारमा ल्याएको इट्रान्स नियो र प्लुटो स्कुटर नेपाली बजारमा व्हाइट लोटसले बिक्री गरिरहेको छ।
भारतको हैदराबाद रहेको स्टार्टअप कम्पनी प्योर ईभीले लन्च गरेका यी स्कुटरहरू अत्यधिक किफायती प्रमाणित भएका छन् । नेपालमा रु. २ लाख २५ हजारको रेन्जमा उपलब्ध यी स्कुटरको विशेषता भने बेजोडको छ।
यसले फुल चार्जमा १२० किलोमिटरको यात्रा गर्न सकिन्छ। साथै, यसको उच्च गति ६० किमी / घण्टा छ। यति मात्र होइन, यो स्कुटरले मूल्यको हिसाबले ओला र भारत कै टिभीएस क्यु सँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्छ, जसको मूल्य यसको तुलनामा निकै उच्च छ। यसका आधिकारिक बिक्रेता व्हाइट लोटसका कार्यकारी निर्देशक अशोक खड्गीका अनुसार यो स्कुटरले जम्मा १५ पैसाको खर्चमा नै एक किलोमिटर यात्रा गराउँछ।
५ सेकेन्डमा ४० किमी प्रतिघण्टाको गति
बिक्रेता कम्पनीले यो ईभी स्कुटरको बारेमा दाबी गरेको छ कि यसले ५ सेकेन्डमा ० देखि ४० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गति लिन सक्छ । साथै, यसको लोड क्षमता १५० केजी सम्म छ। यसमा सेतो, रातो, निलो, कालो, खैरो र सिल्भर गरी जम्मा ६ रङ विकल्पहरू छन्। यो ई-स्कुटरमा चार इन्चको एलसीडी डिस्प्ले, रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ, एलईडी हेडलाइट र एन्टी थेफ्ट स्मार्ट लक छ।
यो विद्युतीय स्कुटरका नेपालमा एक दर्जन भन्दा बढी स्थानहरूमा डिलरहरू छन्। यो इलेक्ट्रिक स्कुटर २. केडब्लुएच लिथियम ब्याट्रीद्वारा सञ्चालित छ, जुन बीएलडीसी मोटरसँग जोडिएको छ। घरमा नै सजिलै प्लगमा चार्ज जोडेर यो स्कुटर चार्ज गर्न सकिन्छ। अप्ठ्यारो पर्दा यसमा पोर्टेबल ब्याट्री छ, जसको मद्दतले तपाई सजिलै यो ब्याट्री निकाल्न र चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्कुटरले पूर्ण चार्ज गर्दा इको मोडमा १२० किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिनेछ, जबकि यसको टप स्पिड ६० किलोमिटर छ।
के छ थप विशेषता ?
विद्युतीय सवारीको सञ्चालन खर्च अति नै कम रहेको खड्गीको दाबी छ। खड्गी भन्छन्, ‘तपाई जम्मा १५ पैसाको लागतमा एक किलोमिटर यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। जबकि पेट्रोलबाट चल्ने स्कुटरमा एक किलोमिटर यात्रा गर्दा औसत ४ रुपियाँ खर्च हुने देखिन्छ।’ त्यसैले कम खर्चमा यात्रा गर्न सक्नु नै यसको प्रमुख विशेषता हो।
प्योर ईभीको ई–प्लेटोमा ६० भोल्ट २.५ किलोवाट आवर क्षमताको लिथियम आयोन ब्याट्री प्याक रहेको छ । ई–प्लुटोको उच्च गति ६० किलोमिटर प्रतिघण्टा छ । त्यसै गरी नियो इन्ट्रान्स पनि ६० भोल्ट २.५ किलोवाट आवर क्षमताको लिथियम आयोन ब्याट्री रहेको छ । इलेक्ट्रोनिक भेहिकल (ईभी) को प्योर स्कुटर बिशेषता र पर्फर्मेंन्स पेट्रोल स्कुटरको १२५ सिसि बराबर रहेको छ।
यसबाहेक घरमा वा अफिसमा जहाँ पनि यसलाई चार्ज गर्न सकिन्छ। यदि कथम् कदाचित् बाटैमा ब्याट्रीको चार्ज सकियो भने सजिलै ब्याट्री निकालेर कतै लगी बढीमा आधा घण्टामा नै फेरी स्कुटर चलाउन सकिन्छ। ‘यदि कसैले एक्स्ट्रा ब्याट्री राखेको छ भने त यस्तो समस्या कहिले पनि आउँदैन’, खड्गी भन्छन्।
यस स्कुटरमा १.५ किलोवाट र २.२ किलोवाट क्षमताको दुई मोटर अप्सन पाउन सकिन्छ । यसमा रहेको ब्याट्रीलाई एक पटक फुल चार्ज गर्दा १२० किलोमिटर चलाउन सकिन्छ ।
ब्याट्रीको मूल्यमा आउँदैछ गिरावट
व्हाइट लोटसका सञ्चालक अशोक खड्गीका अनुसार उनको कम्पनीले चाँडै लामो दुरीको लागि समेत यात्रा गर्न मिल्ने विद्युतीय माइक्रो बस आयात गर्दै छ। त्यो आएपछि हालको तुलनामा लगभग आधा भाडामा नै यात्रुहरूले लामो दुरीको समेत यात्रा गर्ने अवसर पाउने उनको दाबी छ। खड्गी भन्छन्, ‘सरकारले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ५० वटा चार्जिंग स्टेसन बनाउने भएपछि हामी उत्साहित भएका छौँ। त्यसैले आधा घण्टामा नै चार्ज हुने माइक्रो बस नेपाल भित्राउने प्रक्रिया हामीले सुरु गरिसकेका छौँ।’
ब्याट्री फेर्नुपर्‍यो भने ठुलो रकम खर्च हुन्छ भन्ने चिन्ता नगर्न उपभोक्तालाई उनी सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘सन् २०१० मा १ किलोवाट आवरको ब्याट्री १२०० डलर पर्थ्यो अहिले त्यसको मूल्य १२० डलर छ। अब भारतमा सन् २०२४ सम्ममा यस्ता ब्याट्री उत्पादन हुँदै छन् त्यसपछि ८०/९० डलरमा झर्ने अपेक्षा छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लिथियम आयोन ब्याट्रीको मूल्यमा समेत गिरावट आउँदै गरेकोले अब पहिले जस्तो ब्याट्री फेर्नुपर्‍यो भने ठुलो रकम खर्च हुन्छ भन्ने चिन्ता नगर्न उपभोक्तालाई उनी सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘सन् २०१० मा १ किलोवाट आवरको ब्याट्री १२०० डलर पर्थ्यो अहिले त्यसको मूल्य १२० डलर छ। अब भारतमा सन् २०२४ सम्ममा यस्ता ब्याट्री उत्पादन हुँदै छन् त्यसपछि ८०/९० डलरमा झर्ने अपेक्षा छ।’
त्यसो त हाल सो कम्पनीले बजारमा ल्याएको इ-प्लेटो र नियो इन्ट्रान्सको ब्याट्रीमा ३ वर्षको वारेन्टी नै छ। उनका अनुसार सामान्यतया यी ब्यत्रिले ६/७ वर्ष काम गर्छन्। त्यसपछि मात्रै फेर्नु पर्ने हुन्छ। जुन बेला यस्ता ब्याट्रीको मूल्य हालको तुलनामा निकै नै सस्तो भइसकेको हुनेछ
Posted in pressLeaveaComment on एक किलोमिटर यात्रा गर्दा १५ पैसा मात्रै खर्च हुने स्कुटर नेपाली बजारमा
Posted in pressLeaveaComment on ‘ई-कमर्स गर्नेले वातावरण राम्रो होस् भन्दै पर्खेर बस्न हुँदैन’
Posted on November 1, 2021 November 1, 2021 by teamventure
Posted in pressLeaveaComment on PRIVATE EQUITY WITH TEAM VENTURES || ft. TENZIN GONSAR || S6 EP 86 | The Doers Nepal || ANUP GHIMIRE
Symbol UPPER SYANGE (Upper Syange Hydropower Limited)
Fiscal Year 077-078
Announcement Detail Upper Syange Hydropower Limited has proclaimed its 5th AGM going to be held on Ashwin 24, 2078
Announcement Date 2021/09/19 AD (2078/06/03 BS)
Agenda Financial Highlights of 2077/78, Appointment of Auditors for the FY2078/79, Establishment of new board of Director, Amendment on Articles/Memorandum, Issuance of IPO and Others.
% Bonus Share
Right Share Ratio
Date 2021/10/10 AD (2078/06/24 BS)
Venue Central Office of Upper Syange Hydropower Limited, Chandol-4, Kathmandu (Via Online Virtual in case if any situation)
Posted in pressLeaveaComment on UPPER SYANGE (Upper Syange Hydropower Limited)
Posted on November 1, 2021 by teamventure
Kriti Venture Fund,aNepalese fund that counts private equity firm Team Ventures as its institutional backer, has struck its first investment in the agriculture sector as it seeks to diversify its portfolio basket. The venture fund has so far invested inabunch of companies engaged in hydropower generation.
Posted in pressLeaveaComment on Nepal’s Kriti Venture Fund makes maiden agriculture bet
Posted in pressLeaveaComment on Nepalese PE firm Team Ventures names CIO
काठमाडौं : अप्पर स्यांगे हाइड्रोपावर कम्पनीले आइपीओ निष्काशन गर्ने तयारी गरेको छ । आइपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले असोज २४ गते साधारण सभा बोलाएको छ । सभा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय चन्डोल ४ काठमाडौंमा बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ । सभामा कम्पनीको अधिकृत र जारी पुँजी वृद्धि गरी प्रबन्धपत्र तथा नियामालीमा संशोधन गर्ने एजेन्डा पनि छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका प्रस्ताव पनि पेश गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अर्को एजेन्डा पनि छ ।
Posted in pressLeaveaComment on अप्पर स्यांगे हाइड्रोपावरको आइपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौं – भारतको हैदराबादमा उत्पादन भएको दुई पांग्रे विद्युतीय इलेक्ट्रिक स्कुटर ब्रान्ड प्योर ईभीले हिन्दुहरुको महान चाडपर्वको अवसरमा विशेष अफर ल्याएको छ । ‘प्योरमा स्योर अफर’ नाम दिइएको उक्त अफर अन्तर्गत स्कुटर ग्राहकहरुलाई विशेष छुट प्रदान गरिनुका साथै ३ जना ग्राहकलाई विशेष उपहारको व्यबस्था गरिएको छ ।
स्योरसट क्यासब्याक अन्तर्गत प्योर ईभीका तीन स्कुटरमा १० हजार र १५ हजार छुट उपलब्ध हुनेछ । इलेक्ट्रिक स्कुटर ईप्लुटो ७जी र ईट्रान्स नियो खरिद गर्दा १० हजार छुट उपलब्ध हुनेछ भने ईट्रान्स प्लस खरिद गर्दा १५ हजार छुट उपलब्ध हुनेछ ।
त्यसैगरी ग्यारेन्टिड गिफ्ट अन्तर्गत चार मध्ये कुनै एक पुरस्कार अवश्य पर्नेछ । ग्राहकलाई दिइएको स्क्र्याच कुपनबाट पहिलो पुरस्कारको रुपमा ५ हजार, ७ हजार ५ सय वा १० हजार नगद पुरस्कार प्राप्त हुनेछ । त्यसैगरी दोस्रो पुरस्कारको रुपमा १२८ जीबीको आईफोन १२ प्राप्त हुनेछ । तेस्रो पुरस्कारको रुपमा दुई जना व्यक्तिका लागि पोखराको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टमा दुईतर्फी एयर टिकट सहित २ रात र ३ दिन बस्न मिल्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने चौथो पुरस्कारको रुपमा अटोनिक्स भोल्टिक इलेक्ट्रिक साइकल प्राप्त हुनेछ ।
यी वाहेक ग्रान्ड प्राइजको रुपमा ईट्रान्स प्लस इलेक्ट्रिक स्कुटर एक जनालाई प्राप्त हुनेछ । स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकहरुलाई प्रदान गरिएको स्क्र्याच कार्डमा भएको गिफ्ट कोडको आधारमा यो पुरस्कार प्राप्त हुनेछ ।
प्योर ईभीको यो अफर सेप्टेम्बर १ देखि नोभेम्बर १६ सम्म लागू हुनेछ । नेपाली बजारमा प्योर ईभीका इलेक्ट्रिक स्कुटर ईप्लुटो ७जीको मूल्य २ लाख ४९ हजार, ईट्रान्स नियोको मूल्य २ लाख २९ हजार र ईट्रान्स प्लसको मूल्य १ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा नक्साल, टेकु, गावहाल र गट्ठाघर तथा उपत्यका वाहिर बुटवल, कावासोती, नारायणघाट, हेटौडा, जनकपुर, इटहरी, विर्तामोड र पोखरामा प्योर ईभीका सोरुम छन् । नेपालमा ह्वाइट लोटस मोटर्स प्रालिले प्योर ईभीको आधिकारिक वितरकको रुपमा कार्य गरिरहेको छ ।
Posted in pressLeaveaComment on प्योर ईभीका इलेक्ट्रिक स्कुटर किन्दा नगद छुट देखि आईफोन र स्कुटर सम्म उपहार पाइने